असार २४, २०७७ | रूथ रस्तोगी
सामान्यतः सरकारी विद्यालयका प्राथमिक कक्षामा कालो पाटीका अतिरिक्त कतै कतै पुराना, धुलाम्मे चार्टसम्म देख्न पाइन्छन् । तर शिक्षकले अलिक खुल्ला दिमागले सोच्ने र थोरै मात्र ‘कष्ट’ गर्ने हो भने पनि कक्षा–कोठामा अनेकौं रोचक शैक्षिक सामग्री जुटाउन र त्यस अनुरुपका गतिविधि गर्न सम्भव हुन्छ ।
कुरो आफ्नै घरबाट शुरू गरौं । जसरी कुनै पनि घरमा खाना पकाउन भान्सा-कोठा, गफगाफ-भेटघाट गर्न बैठक-कोठा र सुत्न ‘बेडरूम’ को आ-आफ्नै महत्व हुन्छ, त्यसैगरी सिक्न-सिकाउन कक्षा-कोठा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराको पनि आफ्नै महत्व छ । तपाईंको भान्सा-कोठामा एउटा चूलो र केही भाँडाकुँडा मात्र छन् भने तपाईं जतिसुकै सिर्जनात्मक भान्से भए पनि केही पकाउन सक्नुहुन्न । त्यहाँ चामल पनि छ भने भात त पाक्ला तर त्यस बाहेक केही पाक्न सक्तैन । चामलसँगै दाल, नून र घिउ पनि छ भने दाल-भात अथवा चाम्रे वा खिचडीसम्म पकाउन सकिएला ।
कसैले त्यस्तो भान्सा-कोठा मन पराउला; जहाँ केवल चामल, दाल, नून र घिउ मात्र होस्– जसबाट एक-दुई वटा खानेकुरा मात्र पकाउन सकियोस् ? जसको पनि चाहना हुन्छ– भान्सा-कोठामा कम्तीमा विभिन्न तरकारी, जीरा-मेथी र अन्य मरमसला, चिनी, चियापत्ती र दूध त होस् नै । कुराको चुरो के भने, भान्सा-कोठामा जति धेरै सामग्री हुन्छ खानेकुराका उति नै धेरै परिकार बनाउन सकिन्छ ।
यही कुरा कक्षा-कोठामा पनि लागू हुन्छ । आफूलाई शिक्षकका ठाउँमा राखेर यसो सोचिहेर्नोस् त– ब्ल्याकबोर्ड, केही टुक्रा चक, एउटा डस्टर र केही धुलामे, थोत्रा चार्ट मात्र भएको कक्षा–कोठामा तपाईंले बच्चालाई कति सिकाउन सक्नुहोला र उनीहरूले के-कति सिक्न सक्लान् ?
कक्षाकोठा यस्तो हुनुपर्छ जहाँ सिक्ने गुन्जाइस होस् । विद्यार्थीले शिक्षकको व्याख्यानभन्दा आफ्नो अनुभवबाट बढी सिक्छ । आफ्ना वरिपरि जे भइराखेको छ त्यसलाई कथा, कहानी, पुतलीको खेल, चित्र बनाउने, लेख्ने, किताब पढ्ने र विविध खेलका माध्यमबाट संप्रेषित गर्दै उसले विभिन्न कुरा सिक्दै जान्छ । उसमा रचनात्मकताको विकास त्यसवेला मात्र हुन सक्छ, जब कक्षा-कोठामा शिक्षकले विविध गतिविधि गराउँछन् । म यहाँ प्राथमिक तहका कक्षा-कोठामा केन्द्रित भएर कुरा गर्दैछु । कोठा सानो छ भने यस्ता गतिविधिका लागि बार्दली/दलान; आँगनको प्रयोग पनि गर्न सकिन्छ । अथवा डेस्क-बेन्चलाई एउटा कुनामा राखेर ठाउँ निकाल्न सकिन्छ । गतिविधिका लागि चाहिने सामग्री जुत्ताका डिब्बा अथवा कुनै बाकसमा राख्न सकिन्छ । विद्यार्थीले आफूलाई जे चाहियो त्यो सामान आफ्नो डेस्कमा लैजान पाऊन् !
यस्तो पनि पढाइ हुन्छ ?
तपाईंलाई लाग्दो होला, बालुवा र माटो खेलेर अथवा लुडो/साँप-सिंढी खेलेर बच्चाले के सिक्छ ? किताब छोडेर अरू कुरामा बरालिन थालेपछि कसरी ज्ञान प्राप्त गर्छ, यस्तो पनि पढाइ हुन्छ ? हो, हुन्छ । यस्ता खेलबाटै उनीहरूको शारीरिक, मानसिक र सामाजिक रूपमा सक्रिय रहने आन्तरिक आवश्यकता पूर्ति हुने हो । यस्ता गतिविधिका निम्ति तपाईंले मौका नदिए पनि उनीहरू त्यस्तो मौका र समय निकालिहाल्छन्– तपाईंलाई मन परोस् अथवा नपरोस् । तपाईंले केटाकेटीलाई विना कारण आफ्नो स्कूल ब्याग अथवा पेन्सिल बक्स खोल्दै–बन्द गर्दै गरेको, पेन्सिल तिखारिरहेको, टिफिन बक्स खोल्दै–पुछ्तै गरेको, बाथरुम जाँदै-आउँदै गरेको त देख्नुभएकै होला । ती ‘गतिविधि’ गर्ने अवसर नदिइएका कारण तिनले गरिरहेका गतिविधि हुन् !
तपाईंले औपचारिक शिक्षाको समय घटाइदिनुभयो भने विद्यार्थीले तपाईंको कुरामा बढी ध्यान दिनेछन् किनभने उनीहरूले बुझेका हुन्छन्– अब छिट्टै ‘खेल्न’ (गतिविधि गर्न) पाइनेवाला छ । तिनले आफ्ना योजना र तिनको कार्यान्वयनबारे चर्चा गर्नु भनेको आत्मविश्वासी, आत्मनिर्भर र रचनात्मक बन्न सिक्तै जानु हो । त्यही क्रममा उनीहरू अरूसँग मिलेर कसरी काम गर्ने भन्ने पनि सिक्छन् । विभिन्न पदार्थका गुण–धर्मका बारेमा सिक्छन् । जिम्मेदार बन्न सिक्छन् । विभिन्न वस्तु ल्याएर प्रयोग गरिसकेपछि फेरि जहाँको तहीं लगेर दुरुस्त राख्न सिक्छन् । अरूको व्यवहार निरीक्षण गर्छन् । यति मात्र होइन, अरू बच्चाबाट पनि सिक्छन् । त्यसैले विद्यार्थीलाई पाठ्येतर गतिविधिका निम्ति पर्याप्त समय दिनु जरूरी छ– जसबाट तिनलाई यस्तो गतिविधि पटक-पटक गर्ने अवसर उपलब्ध होस् र तिनले आफ्नो बोध एवं रचनात्मकतालाई परिष्कृत गर्न सकून् ।
केटाकेटीलाई स्वस्थ र प्रसन्नचित्त रहन खेल्नु जरूरी हुन्छ । शिक्षकको नाताले तपाईं यसमा उनीहरूलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ । त्यसबाट तपाईंको शैक्षणिक उद्देश्य पनि सँगसँगै पूरा हुँदै जान्छ । उदाहरणका लागि कथा सुनाउने र किताब वाचन गर्ने कुरालाई नै खेल बनाउन सकिन्छ । केटाकेटीले किताब वाचन गरेर अरूलाई सुनाए भने उनीहरूको पढ्ने क्षमता विकसित हुँदै जान्छ । पाठ्यपुस्तकको एउटा पाठ वाचन गरेपछि आफूलाई मन पर्ने कथा अथवा कविताको किताब ल्याएर वाचन गरी सुनाउने छूट दिनुभयो भने उनीहरूलाई किताब पढ्न आनन्द लाग्न थाल्नेछ ।
सक्रिय कक्षाको व्यवस्थापन
सक्रिय कक्षा निर्माण गर्न पक्कै पनि निकै मिहिनेत पर्छ; त्यसको व्यवस्थापन त अझ् कठिन छ । परन्तु यो एकपल्ट दिनचर्याको अंग बनिसकेपछि तपाईं हँसिलो–उज्यालो शिक्षक बन्न पुग्नुहुन्छ अनि तपाईंका विद्यार्थी पनि प्रसन्न र सृजनशील बन्न थाल्छन् । यस्तो स्थितिसम्म पुग्न अलिकति मुश्किल र तनावबाट चाहिं गुज्रिनै पर्ने हुन सक्छ ।
तपाईंसँग थरी थरीका गतिविधि छन् र तिनलाई हरेक दिन गराउन थाल्नुभयो भने छिट्टै थाहा पाइहाल्नुहुन्छ– केटाकेटीलाई पढाउन कति सजिलो भनेर । उनीहरूलाई स–साना समूहमा बाँडेर अलग–अलग गतिविधि गराउनु र आफूले पनि उनीहरूसँगै काम गर्नु बढी उपयोगी र व्यावहारिक हुन्छ । प्रत्येक विद्यार्थीलाई तपाईंको समय र ध्यानको आवश्यकता हुन्छ । कसैलाई अंक अथवा हिसाबमा तपाईंको सहयोग चाहिएको हुन्छ त कसैलाई शब्द अथवा भाषाको कुरामा । उनीहरू सबैलाई तपाईं त्यसवेला मात्र मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ जब कक्षाका अरू विद्यार्थी अलग–अलग काममा मग्न होऊन् ।
कहिलेकाहीं प्रश्न उठाइन्छ– पुतलीको बिहा, भात पकाइ अथवा डाक्टर–बिरामी जस्ता खेल कक्षामा खेलाइनु ठीक हो कि होइन ? बिल्कुल ठीक हो । यसमा केही अनुचित छैन । केटाकेटीलाई यस्ता खेल खेल्ने मौका दिनुपर्छ । यसबाट उनीहरूको गतिविधिमा एक प्रकारको जीवन्तता आउँछ ।
एउटा गतिविधि आज गराएर फेरि दुई हप्तापछि मात्र गराउन थाल्नुभयो भने विद्यार्थीलाई सिक्न कठिन हुन्छ । त्यसैगरी पूरै कक्षालाई एउटै गतिविधि गराउन खोज्नुभयो भने तपाईंलाई मुश्किल पर्छ । मानिलिऊँ, तपाईंले एकदिन कक्षाका सबै विद्यार्थीले ‘क्ले एरिया’ (मुछेको माटो) मा काम गर्ने भनेर तय गर्नुभयो भने ३०-४० जना विद्यार्थीबीच माटो खोसाखोस, तानातानी, ठेलाठेल र झगडा शुरू हुन्छ । अथवा, तपाईंले ‘आज सबै विद्यार्थीले कथा–कविताका पुस्तक पढ्ने’ भन्ने घोषणा गरिदिनुभयो तर उता पुस्तकालयमा चाहिं त्यस्ता १५ वटा मात्र पुस्तक रहेछन् भने के होला ? किताब तानातान र खोसाखोसको यस्तो उत्पात मच्चिन्छ, तपाईंलाई ‘लर्निङ क्लासरूम’ को विचारलाई नै बाई-बाई गरूँ जस्तो लाग्न सक्छ ।
त्यसैले, कक्षाका सबै विद्यार्थीलाई एउटै गतिविधिमा लगाउनुको सट्टा स–साना समूहमा बाँडेर वेग्लावेग्लै गतिविधि गराउनु उचित हुन्छ । यसो गर्दा सबै विद्यार्थी आ–आफ्नो काममा व्यस्त हुन्छन् र एउटै गतिविधिका निम्ति उनीहरूबीच घमासान पनि पर्दैन । जस्तै, चार जना विद्यार्थी बालुवाको खेलमा लाग्न सक्छन्, ‘मुछेको माटो’ मा पाँच–छ जना संलग्न हुन सक्छन्, दश जनासम्मलाई चित्रकलामा लगाउन सकिन्छ, चार जनाले घरपरिवार खेल्न सक्छन् अनि दुई विद्यार्थी डाक्टर-बिरामी खेलमा व्यस्त हुन सक्छन् । दुई विद्यार्थी कागज काट्ने-टाँस्ने खेलमा, पाँच जना पुस्तक वाचन गर्ने काममा, चार जना तित्रीका गेडा र आइसक्रीम खाने चम्चाबाट कुनै आकृति बनाउने खेलमा, दुई जना बिग्रेको टेबुल घडी अथवा बिजुलीको स्विच खोल्ने-जोड्ने खेलमा लाग्न सक्छन् अनि पाँच–छ विद्यार्थीलाई ‘पजल्स्’मा व्यस्त बनाउन सकिन्छ । यसप्रकार केटाकेटीलाई विभिन्न गतिविधिमा व्यस्त राख्ने हो भने कक्षामा अराजकताको वातावरण पैदा हुन पाउँदैन ।
तपाईंको कक्षामा तीस जना विद्यार्थी छन् भने दुई वा तीन समूह मात्रमा बाँडेर पनि पढाइ र खेल/गतिविधिहरूलाई दिनभरि जारी राख्न सकिन्छ । एउटा समूहलाई पढाउँदा अन्य समूहलाई खेल/गतिविधिमा व्यस्त राख्न सकिन्छ । तपाईं उनीहरूको कापी जाँच्ने काम गर्न थाल्नुहोस्, उनीहरू गतिविधिमा रम्न थाल्छन् । अथवा, एउटा समूहको कापी जाँच्ता त्यो समूहकालाई सँगै राखेर गल्ती देखाउँदै, बताउँदै, सिकाउँदै गर्ने र अन्य समूहलाई गतिविधिमा लाग्न दिने पनि गर्न सक्नुहुन्छ । भएजति सबै बच्चालाई एकैचोटि पढाउनु अथवा एउटै गतिविधिमा लगाउनुभन्दा यो विधि बढी व्यावहारिक र प्रभावकारी हुन्छ ।
यस्ता तमाम व्यवस्थासँग सामञ्जस्य कायम गर्न विद्यार्थीलाई दुईदेखि तीन हप्तासम्म लाग्न सक्छ । तर हरेक खेल सबैले खेल्न पाइन्छ भनेर उनीहरूले एकपल्ट बुझिसकेपछि गतिविधिका लागि हानथाप गर्न छोड्छन् । आज माटोको खेल खेल्न पाइएन त के भयो, भोलि अथवा पर्सि पालो आइहाल्छ भन्ने उनीहरूलाई थाहा हुन्छ । तपाईंले ख्याल राख्नुपर्ने कुरा चाहिं, बच्चाले खेलिसकेपछि सबै सामान आ-आफ्नो ठाउँमा ठीकसँग राखून् भन्ने हो । नत्र सम्हालिनसक्नु भद्रगोल हुन्छ । सामानहरू व्यवस्थित गर्न अलग–अलग डिब्बामा राखेर बाहिर तिनको नाम लेख्न अथवा चित्र टाँस्न सकिन्छ । त्यसपछि बच्चालाई सामान व्यवस्थित किसिमले राख्ने बानी पर्दै जान्छ । उनीहरू आ-आफ्ना गतिविधिमा व्यस्त हुन र त्यसमा ध्यान केन्द्रित गर्न थाल्छन् ।
आ-आफ्नै पाराले, कसैको हस्तक्षेप विना काम गर्न पाएको अनुभवले उनीहरू खुशी हुन्छन् । तपाईंले विशेष ध्यान दिनुपर्ने नियम एउटै छ र त्यो हो— ‘लर्निङ सेन्टर’ (सिकाइ केन्द्र) को उपयोग हरेक दिन गरिएकै हुनुपर्छ ।
यसपछि आउने प्रश्न हो– ‘गतिविधि’ अन्तर्गत के–के सामेल/समावेश गर्न सकिन्छ ? यसका निम्ति मैले तयार गरेको सूची यस्तो छ । (हे. बक्स)
यतिन्जेल मैले कक्षा–कोठाको व्यवस्थापनबारे चर्चा गरें; त्यसको डिजाइनबारे कुनै कुरा गरिनँ । किनभने, तपाईं सक्रिय कक्षाको व्यवस्थापनका सिलसिलामा सानातिना तनाव झेल बानी पर्नुभयो भने यस्तो कक्षा–कोठा बनाउन मिहिनेत त पर्छ तर तनाव उत्पन्न हुँदैन ।
ब्ल्याक बोर्ड छेउछाउको क्षेत्र
कक्षा–कोठामा एउटा ब्ल्याक बोर्ड त हुन्छ हुन्छ । त्यसको छेउछाउको ठाउँलाई प्रयोग गर्न सकिने सम्भावना कत्तिको हुन्छ ? त्यहाँ तपाईंले के कस्ता सामग्री व्यवस्थित गर्नु बेस हुन्छ– जो सदैव तपाईंको पहुँचमा होऊन् ? मेरो विचारमा, ब्ल्याक बोर्ड छेउछाउ यी सबै कुरा राख्नु राम्रो हुन्छः
– मौसमको चार्ट
– देवनागरी र अंग्रेजी वर्णमालाको चार्ट
– १०, २०, ३० जस्ता संख्याहरूको चार्ट
– सप्ताहका दिनहरूको चार्ट
– वर्षका महीनाहरूको चार्ट
– देशको नक्शा
– विश्वको नक्शा
– रंग लगाएर बनाइएको, उँचाइ नाप्ने चार्ट ।
ब्ल्याक बोर्ड छेउछाउ यी सामग्री व्यवस्थित गरेपछि आफूलाई चाहिएको वेला तत्काल उपयोग गर्न सकिन्छ । सामान्यतः कक्षा–कोठामा धेरै ठाउँ हुँदैन । त्यसैले ब्ल्याक बोर्ड छेउ बलिया किला ठोकेर यस्ता वस्तु झुन्ड्याउन सकिन्छ । यसो गरिएन र कक्षा–कोठामा जताततै झुन्ड्याइयो भने चाहिएको वेला तिनको प्रयोग गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ । डेस्कहरूको बीचबाट बांगोटिंगो हुँदै गएर चार्ट लिएर आउने, प्रयोग गर्ने र फेरि त्यसैगरी फिर्ता लगेर झुन्ड्याउने प्रक्रियामा प्रशस्त समय बर्बाद हुन्छ । वर्णमाला, अंक, महीना, बार, कुनै देश/प्रदेशमा कुनै ठाउँको अवस्थिति आदिबारे सिकाउन- बुझाउन शिक्षकले चार्टको उपयोग गर्न थालेपछि विद्यार्थीले पनि सन्दर्भका निम्ति तिनको प्रयोग गर्न सक्छन् ।
कक्षाकोठामा ठूलो ब्ल्याक बोर्ड छ भने त्यसमा मसीना तेर्सा लाइन पेन्ट गराउन सकिन्छ । अंग्रेजी अक्षर लेख्नका निम्ति– अंग्रेजी लेख्ने कापीमा भएजस्तै– रातो र नीलो रंगका लाइन तान्न लगाउन सकिन्छ । यसैगरी देवनागरी अक्षर र अंकहरू लेख्न चारकुने ‘वर्ग’ बनाउन लगाउन सकिन्छ । यसबाट कुन अक्षर अथवा अंक कहाँ, कसरी लेख्ने भनेर विद्यार्थीलाई बुझाउन असाध्यै सजिलो हुन्छ ।
ब्ल्याक बोर्ड भन्दा माथि तीन वटा किला ठोक्नुपर्छ जहाँ आवश्यक परेको वेला चार्ट झुन्ड्याउन सकियोस् । हिजोआज कतिपय स्कूलमा ब्ल्याक बोर्ड मास्तिर एउटा डोरी अथवा तार टाँगिएको हुन्छ । त्यसको फाइदा के हो भने विद्यार्थीसामु कुनै विषयबारे चर्चा गर्दा, कपडा सुकाउन प्रयोग गरिने क्लिपको सहायताले उक्त डोरी/तारमा कागज झुन्ड्याएर त्यसमा लेख्न सकिन्छ । यसरी लेखिएको कागज पछि अन्यत्र झुन्ड्याइदिन सकिन्छ जसलाई बच्चाहरूले फुर्सतका वेला पढ्न सकून् । ब्ल्याक बोर्ड मुनि यस्तो ठाउँ बनाउनुपर्छ जहाँ डस्टर र चकका साथै बेरिएका चार्ट, स्केल, कथा–कहानीका पुस्तक आदि पनि राख्न सकियोस् । कक्षा–कोठालाई यसरी व्यवस्थित गर्नुपर्छ, शिक्षकले आवश्यक सामग्री लिन कक्षा बाहिर जानु नपरोस् ।
विद्यार्थीका लागि कक्षामा एउटा बेग्लै बोर्ड पनि राख्न सकिन्छ । बोर्ड नभए कक्षा अथवा दलानकै एउटा भित्तामा गेरू अथवा पहेंलो रंग लगाएर ‘बोर्ड’ तयार पार्न सकिन्छ । यो बच्चाहरूले प्रयोग गर्ने बोर्ड भएकोले धेरै अग्लो हुनुहुँदैन ।
स्कूलमा पुस्तकालयको प्रयोग त्यसको उद्देश्य अनुरूप गर्ने चलन छैन । हप्तामा एक दिन पुस्तकालयको ‘कक्षा’ हुन्छ । त्यसमा विद्यार्थीहरू पुस्तकालय अवश्य जान्छन् तर त्यहाँ कि चूपचाप बस्छन् अथवा मन नलागी नलागी कुनै पुस्तक वा पत्रिकाको पाना पल्टाएर समय बिताउँछन् । कति चाहिं साथीहरूसँग खासखुस गर्न व्यस्त हुन्छन् । घण्टी लाग्नासाथ उठेर हिंड्छन् । पुस्तकालयमा रमाउने त कुनै संभावना नै हुँदैन । त्यसमाथि, यस्ता पुस्तकालयहरूमा स–साना विद्यार्थीका लागि उपयुक्त कथा–कहानीका किताब पनि प्रायः हुँदैनन् ।
तपाईंको स्कूलको पुस्तकालयमा ‘लाइब्रेरियन’ छन् भने उनलाई कतिपय कथा–कहानी वाचन गरेर विद्यार्थीलाई सुनाउन आग्रह गर्न सकिन्छ । अथवा, विद्यार्थीलाई पुस्तकालय लगेर तपाईं आफैं कथा पढेर सुनाउन सक्नुहुन्छ । यस्तो अवश्य गर्नुहोस् । यसरी तपाईंले विद्यार्थीलाई किताबको दुनियाँ र त्यसबाट प्राप्त हुने आनन्दसँग परिचित गराउन सक्नुहुन्छ ।
यसनिम्ति तपाईं आफ्नो कक्षामा वेग्लै, स-सानो पुस्तकालय पनि बनाउन सक्नुहुन्छ । यसो गर्नुभयो भने विद्यार्थीले समय पाउँदा रमाइला पुस्तक निकालेर कक्षामै पढ्न सक्छन् । कक्षा–कोठामा ठाउँ छ भने ‘लाइब्रेरी–एरिया’ मा भुईंमै बसेर पनि उनीहरूले किताबको आनन्द लिन सक्छन् । तिनलाई हरेक दिन किताब पढ्ने र त्यसमाथि चर्चा गर्ने मौका दिनुभयो भने उनीहरू तपाईंसँग किताबको विषयवस्तुबारे विस्तारपूर्वक कुरा गर्न थाल्नेछन् । तिनको कुराकानीलाई रेकर्ड गर्न पनि सकिन्छ । सामान्यतः हाम्रा स्कूलमा किताबबारे विस्तृत चर्चा गर्ने समय छुट्याइएको हुँदैन । त्यस कमीलाई यस्ता गतिविधिले धेरै हदसम्म पूरा गर्छन् ।
यो क्रम अघि बढ्दै जाँदा विद्यार्थीले चुट्किला, हँस्यौली, गाउँखाने कथा, कविता वा छोटा कहानीहरूका स–साना पुस्तिका समेत स्वयम् तयार पार्न सक्छन् । यस्तो सक्रियतालाई प्रोत्साहित गर्नोस् । तपाईं स्वयम् पनि उनीहरूका लागि यस्ता पुस्तिका तयार पार्न सक्नुहुन्छ । हस्तलिखित यस्ता पुस्तिकाहरूलाई : र्‍याकमा छुट्टै राख्न सकिन्छ अथवा कक्षागत पुस्तकालयमा समावेश गर्न सकिन्छ ।
माटो र बालुवा
लेस्याइलो माटो सामान्यतः जहाँ पनि पाइन्छ । यसलाई बाल्टीमा भरेर, चीसो कपडाले छोपेर राख्नुपर्छ । माटोका गतिविधि गर्ने ठाउँ (क्ले एरिया) मा केटाकेटीलाई बस्न प्लास्टिक/पोलिथिन अथवा पुराना अखबार राख्न सकिन्छ । हरेक दिन माटो भिजाएर डल्ला बनाई राखिदिनुहोस् जसबाट विद्यार्थीलाई गतिविधि गर्न सहज होस् । डल्लासँगै, भिजाएका कपडाका टुक्रा पनि राखिदिनु राम्रो हुन्छ ।
केटाकेटीलाई खेल्न मन पर्छ । बालुवा भिजाउन एउटा सानो बाल्टीमा पानी राखिदिए हुन्छ । सुक्खा बालुवालाई छान्न सकिन्छ, एउटा सिसीबाट अर्को सिसीमा हाल्न सकिन्छ, भिजेको बालुवाबाट अनेक वस्तुको आकृति बनाउन सकिन्छ । केटाकेटीको रचनात्मकतालाई भरपूर मौका दिन त्यहाँ अनेकथरिका स–साना भाँडाकुँडा, बालुवा खोस्रिने वस्तु, काठका टुक्रा, सिन्का, प्लास्टिक-पाइपका टुक्रा आदि राखिदिन सकिन्छ ।
कला–शिक्षण सबै विषयको अन्तरंग हिस्सा हुनुपर्छ । तर यतातिर मानिसको ध्यान जाने गरेको छैन । प्रायः के हुन्छ भने, कुनै शिक्षकलाई पढाउन अल्छी लाग्यो भने उसले विद्यार्थीलाई भन्छ– ‘चित्रकलाको कापी निकाल र आफूलाई जे मन लाग्छ त्यसको चित्र बनाऊ ।’ अनि आफूचाहिं आराम गर्न थाल्छ । तर यसमा शिक्षकको—थोरै भए पनि– सक्रियता अवश्य चाहिन्छ । केटाकेटीलाई चित्रकलामा त्यसवेला मात्रै आनन्द आउँछ जब आवश्यक सबै सामग्री उपलब्ध हुन्छन् । उनीहरूलाई प्रयोग गर्न पर्याप्त समय पनि दिनुपर्छ । कलामा उनीहरूको मस्तिष्क र कल्पनाशीलताको विकास गर्ने गज्जबको क्षमता हुन्छ । यसको अभ्यासमा लागेपछि केटाकेटीहरू प्रकृति र अन्य कुराहरूलाई ध्यानले हेर्न थाल्छन् र आफ्ना वरिपरिको ‘प्याटर्न’ प्रति संवेदनशील बन्दै जान्छन् । खुशी, निराशा वा क्रोध व्यक्त गर्न पनि कला निकै राम्रो माध्यम हो ।
तपाईंसँग थरी थरीका गतिविधि छन् र तिनलाई हरेक दिन गराउन थाल्नुभयो भने छिट्टै थाहा पाइहाल्नुहुन्छ– केटाकेटीलाई पढाउन कति सजिलो भनेर । उनीहरूलाई स–साना समूहमा बाँडेर अलग–अलग गतिविधि गराउनु र आफूले पनि उनीहरूसँगै काम गर्नु बढी उपयोगी र व्यावहारिक हुन्छ । प्रत्येक विद्यार्थीलाई तपाईंको समय र ध्यानको आवश्यकता हुन्छ ।
हामीकहाँ कथा केवल बोलेर सुनाउने चलन छ । शिक्षकले यसरी कथा सुनाउँदा केटाकेटीको दिमागमा त्यसका पात्र, विषयवस्तु, ठाउँ र घटनाका अलग–अलग छवि बनेका हुन्छन् । त्यसो हुँदा, एउटा कथा सुनाएर केटाकेटीलाई त्यसको कुनै घटना वा पात्रको चित्र बनाउन लगाउने हो भने त्यहाँ पर्याप्त विविधता देख्न सकिन्छ । उनीहरूको कल्पनाशीलता त्यहाँ प्रकट हुन्छ ।
दुर्भाग्य चाहिं के हो भने प्रायः शिक्षकहरू कलाको नाउँमा ब्ल्याक बोर्डमा सरसर्ती कुनै कुराको चित्र बनाइदिन्छन् र विद्यार्थीलाई त्यसको नक्कल गर्न लगाउँछन् । अझ् कतिले त यति दुःख पनि गर्दैनन्, सीधै पाठ्यपुस्तक हेरेर कुनै चित्र ‘सार्न’ आदेश दिन्छन् । यसले केटाकेटीको सृजनशीलता त कुण्ठित हुन्छ नै, आफ्नो सृजना स्वीकार्य छैन भन्ने पनि उनीहरूलाई महसूस हुन थाल्छ ।
रंगका नाममा अभिभावकले छोराछोरीलाई प्रायः ‘क्रेयोन’ ल्याइदिने गर्छन् तर उनीहरूलाई अरू पनि धेरै खाले रंगको आवश्यकता हुन्छ । वाटर–कलर र पेस्टल पनि पाउने हो भने चित्रकलामा तिनलाई झ्न् मजा आउँछ । उनीहरूलाई आफैं रंग बनाउन पनि सिकाउन सकिन्छ । यस्ता रंग मेंहदी, सिन्दूर, गेरू, विभिन्न फूल, पात अथवा ईंटका टुक्रा मात्र होइन खरानी र माटोबाट पनि बनाउन सकिन्छ । सिमेन्टमा मिसाउने रंग पनि सावधानीपूर्वक उपयोग गर्न सकिन्छ । यस्तो रंगको धूलोमा अलिकति गुँद अथवा सरेस मिसाएर पानीमा राम्ररी घोलेपछि रंग तयार हुन्छ । कतिपय स्कूलहरूमा चित्रकलाका सामग्री किन्ने बजेट हुँदैन । यस्तो अवस्थामा के गर्ने– तपाईं स्वयम्ले उपाय निकाल्नुपर्ने हुन्छ ।
कलाकृति बनाउने सामग्री जहाँ पनि पाइन्छन् । जस्तैः रूखका हाँगाबिंगा, ऊनी धागो, फलफूलका बियाँ, पुराना पत्रपत्रिका, कपडाका टुक्रा, ढुंगा, चराचुरुंगीका प्वाँख, गत्ता आदि । सबै कुरा गत्तामा टाँस्नुपर्छ भन्ने पनि छैन । चराका प्वाँख र कपडाका टुक्रा सियो–धागोको सहायताले कसरी गत्तामा सिएर अड्याउन/सजाउन/मिलाउन सकिन्छ भनेर विद्यार्थीलाई सिकाउन सकिन्छ, जो आफैंमा रमाइलो गतिविधि हुन सक्छ । उनीहरूलाई टाँक सिउन अथवा फाटेको कपडा सिएर ठीक पार्न पनि सिकाउन सकिन्छ ।
भान्साघर कहाँ राख्ने ?
खाना पकाउने गतिविधिका लागि कक्षामा अलग्गै कुनै ठाउँ तोक्नु जरूरी छैन । डेस्क-बेन्च एकातिर सारेर यो गतिविधि महीनामा तीन-चार पटक गर्न सकिन्छ । बजारबाट आलु ल्याएर चूलोमा उमाल्न वा अरू कुनै कुरा पकाउन सकिन्छ । यसको योजना बनाउनेदेखि कार्यान्वयनसम्मका प्रत्येक चरणमा, प्रत्येक प्रक्रियामा विद्यार्थीको पूर्ण र सक्रिय सहभागिता हुनुपर्छ ।
स्वैरकल्पना (फ्यान्टासी) को सम्भावना
कहिलेकाहीं प्रश्न उठाइन्छ– पुतलीको बिहा, भात पकाइ अथवा डाक्टर–बिरामी जस्ता खेल कक्षामा खेलाइनु ठीक हो कि होइन ? बिल्कुल ठीक हो । यसमा केही अनुचित छैन । यस्ता खेलका लागि केटाकेटीलाई घरबाट पुरानो सल, कुर्ता, सारी, प्लेटहरू, थोत्रो फोन, पर्स जस्ता थोत्रा/पुराना वस्तु लिएर आऊ भन्न सकिन्छ । पुराना सूती कपडा पुछ्न र सरसफाइ गर्न, सिन्थेटिक कपडा पुतली, कठपुतली र अन्य शैक्षणिक सामान बनाउन उपयोगी हुन्छन् ।
केटाकेटीलाई यस्ता खेल खेल्ने मौका दिनुपर्छ । यसबाट उनीहरूको गतिविधिमा एक प्रकारको जीवन्तता आउँछ । स्वैरकल्पनाको खेल एक प्रकारको नाटक नै हो जसमा केटाकेटीहरू आफ्नो भाषा, अनुभव र रुचिहरूको उपयोग गर्छन् । शिक्षकको नाताले तपाईंको कर्तव्य हुन्छ– यस्ता ‘नाटक’ मा संवाद, घटनाक्रम र प्रस्तुतिका निम्ति केटाकेटीलाई प्रेरित गर्नु । ‘नाटक’ कति राम्रो बन्न जान्छ भन्ने भन्दा पनि त्यसमा उनीहरूको सहभागिता कति सक्रिय र उत्साहपूर्ण छ भन्ने कुरा बढी महत्वको हुन्छ । प्रयोगहरूलाई सधैं प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । वास्तविक परिस्थितिहरूमा नै उनीहरूको भाषा, कल्पनाशीलता र रचनात्मकतामा वृद्धि हुन्छ । तपाईंको प्रमुख भूमिका चाहिं आवश्यक सामग्रीको आपूर्तिमा ध्यान दिनु र यस्ता खेललाई प्रोत्साहित गर्नु नै हो ।
कक्षा–कोठाका झयालमा फलामका डण्डी वा ग्रिल लगाइएको छ भने त्यसको उपयोग केटाकेटीका पेन्टिङ/चित्रकला झुन्ड्याउनका निम्ति गर्न सकिन्छ । दुई झयालका बीचमा डोरी टाँगेर त्यहाँ पनि पेन्टिङ/ड्रइङ झुन्ड्याउन सकिन्छ । यस्तो डोरी त्यति मात्र उँचाइमा हुनुपर्छ, जहाँ विद्यार्थीले आफ्ना पेन्टिङ वा चित्र सहजै हेरफेर गर्न सकून् । उनीहरूले भेट्न नसक्ने उँचाइमा चित्र झुन्ड्याइदिनु ठीक होइन ।
कतिपय कक्षा–कोठामा झयालमुनि खुला तखता हुन्छन् । तिनमा बच्चाले भेला पारेका सामग्री मिलाएर राख्न सकिन्छ; खासगरी त्यस्ता वस्तु– जसलाई छोएर हेर्न उनीहरू रहर गर्छन् । यसको प्रारम्भ तपाईंले गर्नुपर्छ तर केही दिन पछि उनीहरू स्वयम् यसमा योगदान दिन थाल्छन् । तपाईं उनीहरूले ल्याएका सामानमा रुचि राख्नुहुन्छ र ती सामान कसरी ल्याएको भनेर जान्न चाहनुहुन्छ भन्ने लाग्नासाथ उनीहरू झ्न् उत्साहित भएर सयौं वस्तु ल्याउन थाल्छन् । एउटाले ल्याएको सामान अरूले विना कुनै डर– त्रास अथवा संकोच छुन, हेर्न, चलाउन मात्र होइन खोल्न, बनाउन र भत्काउन समेत थाल्नेछन् । यसरी ल्याइएका अनेकथरिका ढुंगा, फलफूल र तरकारीका बियाँ/गेडा, नट, बोल्ट, मोटरका पार्टपुर्जा, किला–काँटा, काठका टुक्रा, पत्रपत्रिकाका चित्र इत्यादिको विशेष प्रदर्शनी पनि गर्न सकिन्छ । निश्चित काममा प्रयोग हुने विभिन्न सामग्री सजाउने विशेष प्रोजेक्ट पनि केटाकेटीलाई दिन सकिन्छ । जस्तै– कपालमा प्रयोग गरिने नानाथरीका हेयर ब्यान्ड, रिबन, क्लिप अथवा विभिन्न खाले तेलका खाली बोतल । यसप्रकारका प्रोजेक्टमा विद्यार्थीले बडो उत्साहका साथ भाग लिन्छन् ।
यतिन्जेलमा तपाईंले बुझ्सिक्नुभयो नै होला– शिक्षक स्वयम् राम्रो संग्रहकर्ता पनि हुनुपर्छ । आफ्नै मात्र प्रयासले तपाईं सारा कुरा भेला गर्न सक्नुहुन्न; त्यसका लागि विद्यार्थी र अभिभावकको पनि सहयोग लिनुपर्छ । विभिन्न वस्तु संग्रह गर्न केटाकेटीलाई पटक-पटक सम्झइराख्नुपर्छ । भेला गरिएका वस्तुको ठीकसँग प्रयोग र उपयोग पनि गर्नुपर्छ, अन्यथा उनीहरूले सामान भेला गर्न रुचि लिने छैनन् । थुप्रै शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकमा ‘यो स्कूल मेरो हो’ भन्ने भावनाको अभाव देखिन्छ । सरकारले जिल्ला शिक्षा अधिकारी मार्फत कुनै आदेश दिन्छ, त्यसको ‘कार्यान्वयन’ शिक्षकद्वारा गराइन्छ, कुरो सकिन्छ ! माथि उल्लिखित गतिविधिहरूबाट भने सबैमा स्कूलप्रति अपनत्वको भावना सिर्जना हुने मात्र होइन, सिकाइको उद्देश्य थाहा पाउन र सिकाइको प्रक्रियामा लोकतान्त्रिक सहभागितालाई बुझन समेत मद्दत पुग्छ ।
कतिपय शिक्षकहरू यस्ता गतिविधिमा अभिभावकलाई सामेल गर्नु टाउकोदुखाइ हो भन्ने ठान्छन् । त्यसो हो भने उनीहरू अर्को पेशामा लाग्नु उचित हुनेछ । किनभने यस्ता काममा मैले सधैं नै अभिभावकहरूलाई अत्यन्त सहयोगी र मद्दत गर्न चाहने पाएकी छु । केटाकेटीलाई स्कूल पु¥याउन अथवा स्कूलबाट घर लैजान अभिभावकहरू आएको वेला तपाईं उनीहरूलाई कक्षा–कोठामा लैजानोस् र भेला गरिएका वस्तुहरूको संग्रह देखाएर ती वस्तुबाट केटाकेटीलाई कसरी सिकाउने गरिएको छ भन्ने बताउनोस् । तपाईंले देख्नुहुनेछ– त्यसपछि तपाईंले भनेका कुरामा अभिभावकहरूको रुचि ह्वात्तै बढ्नेछ र सामग्रीको आपूर्ति पनि । यसरी संग्रह गरिएका वस्तुको उपयोग सकिएपछि शैक्षिक सत्रको अन्त्यमा रद्दीवालालाई बेच्न र त्यसरी आएको पैसाले नयाँ सामग्री किन्न पनि सकिन्छ ।
संग्रहका निम्ति आवश्यक सामान
के–के संग्रह गर्नुपर्छ भनेर कुनै सूची उपलब्ध गराउन सम्भव छैन । तपाईंले जस्ता पनि सामग्री संग्रह गर्दै जानुपर्छ; कुन दिन, कतिखेर के चाहिन्छ– के थाहा ? तैपनि, अधिकांश/स-साना वस्तुहरू राख्न साना–ठूला डिब्बा चाहिन्छन् । टाँक र प्लास्टिकका मोती राख्न भेसलिनका खाली सिसी र पेन्टिङका सामग्री राख्न मिठाइका डिब्बा उपयोगी हुन्छन् । पुराना टिफिन बक्स, थोत्रा प्लेट–बटुका–बाटा पनि विभिन्न सामग्री– जस्तै; सियो–धागो, क्रेयोन, नट–बोल्ट, किला–काँटा आदि—राख्नका निम्ति प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
केटाकेटीले अनेक किसिमका डोरी, धागा, सुतलीहरू भेला गर्न सक्छन्– जसको उपयोग सामानहरू झुन्ड्याउने, नाप्ने, कठपुतली बनाउने, सजाउने आदि काममा गर्न सकिन्छ । अभिभावकहरूले ऊन पनि पठाइदिए भने त्यसबाट पुतली/कठपुतलीको कपाल बनाउन अथवा कोलाज निर्माण गर्न सकिन्छ ।
फुटकर सामग्रीः यस्तो सामग्री जे पनि हुन सक्छ र हाम्रै वरिपरि सजिलै पाइन सक्छ । जस्तैः माटो र बालुवा त जहाँ पनि पाइहालिन्छ; कोइला, डोरी, कार्डबोर्ड, पुराना अखबार, गोलीधागोका खाली रील, सूचीकार कहाँबाट रंगबिरंगी कपडाका टुक्रा, सलाइका रित्ता डिब्बा, कपडा सुकाउने क्लिप, फलफूलका बीउ र गेडा, चुराचुरी, पात, चुराचुरुंगीका प्वाँख, काम नलाग्ने भइसकेका कलम, विभिन्न वस्तुका पार्टपुर्जा आदि पाउन पनि कुनै आइतबार पर्दैन । अरूका लागि काम नलाग्ने सामान नै तपाईंका लागि अति उपयोगी हुन्छन् । प्लास्टिकका डिब्बा बीचबाट काट्नोस्– बसी बसी बालुवा खन्ने फुच्चे ‘कोदालो’ तयार !
जुत्ताका डिब्बाः भेला गरिएका वस्तु राख्न जुत्ताका डिब्बा औधी उपयोगी हुन्छन् । कम्तीमा २० वटा डिब्बा कक्षा–कोठाको एउटा भित्तामा टँसाएर लहरै राख्न सकिन्छ । अखबारका पन्ना काटेर टाँसी डिब्बाहरूलाई दरिलो पार्न सकिन्छ । घाम लागेका वेला यो काम केटाकेटीबाट गराउन सकिन्छ– खेल पनि, गतिविधि पनि, काम पनि र सुक्ने पनि चाँडै ! यस्ता डिब्बामा सूचीकार कहाँबाट ल्याइएका कपडाका टुक्रा र गोलीधागोका खाली रीलदेखि थरीथरीका डोरी र सलाईका खाली डिब्बासम्म जे पनि राख्न सकिन्छ । एउटा डिब्बामा आइसक्रीम खाने चम्चा राख्न सकिन्छ त अर्कामा रबरका टुक्राहरू । एउटामा सियो–धागो राखे हुन्छ, अर्कामा थोत्रा कलम त अर्कामा बिहा–बर्तमनका निमन्त्रणापत्र र नव वर्षका शुभकामना–पत्रहरू ।
औजारः गतिविधिमा संलग्न रहने कक्षाका निम्ति कतिपय औजार सधैं आवश्यक हुन्छन् । यस्ता उपकरण हुन्– पन्चिङ मशीन, स्टेपलर, कैंची, स्केल, पेपर क्लिप, हतौडी, स्क्रू ड्राइभर आदि । यिनलाई एउटा छुट्टै तखतामा सबैले भेट्ने गरी राख्नुपर्छ ।
गणित र विज्ञान सम्बन्धी गतिविधिका लागि स्केल, टेप, लेन्स आदि चाहिन्छन् । गन्ती गर्न र विभिन्न ‘प्याटर्न’ बनाउन स–साना ढुंगा, गिट्टी, पात, सिपी आदि पनि जरूरी हुन्छन् । खाना पकाउने गतिविधिमा सिलौटो–लोहोरो उपयोगी हुन्छ– यसको पनि जोगाड गर्नुभए राम्रो !
गुँद अथवा अन्य कुनै टाँस्ने पदार्थ कक्षामा पर्याप्त उपलब्ध हुनुपर्छ । जुनसुकै गतिविधिमा पनि टाँस्ने काम आइपर्न सक्छ । अधिकांश स्कूलमा टाँस्ने पदार्थ पनि पाउन कठिन हुन्छ । यस्तो अवस्थामा मैदा अथवा पीठो पकाएर गुँद बनाउन सकिन्छ । एकपल्ट पकाएको गुँद जाडोमा दुई–तीन दिनसम्म राख्न सकिन्छ । विविधता ल्याउन यसमा दुई–चार थोपा रंग मिसाइदिए हुन्छ । केटाकेटीलाई घरबाट गुँद बनाएर ल्याउने प्रोजेक्ट दिन सकिन्छ, जसमा उनीहरू रमाउनेछन् । साँच्चिकै गुँदका डल्ला चाहिं बजारमा किन्न पाइन्छन् । दुई दिनसम्म पानीमा भिजाएर राखेपछि राम्ररी फिटेर गुँद तयार पार्न सकिन्छ । यस्तो गुँद ठूलो डिब्बामा ‘स्टक’ राखेर केटाकेटीलाई स–साना डिब्बामा दिनु राम्रो हुन्छ । उनीहरूलाई १००-१०० ग्राम ‘गुँद’ किनेर ल्याउने प्रोजेक्ट दिने हो र अभिभावकलाई सहमत गराउने हो भने महीनौंका लागि गुँदको समस्या हल हुन्छ ।
संक्षेपमा भन्दा अलिकति प्रयास र अलिकति कल्पनाशीलताको प्रयोग गरेर तपाईं कक्षा–कोठालाई सिक्ने–सिकाउने जीवन्त स्थलका रूपमा रूपान्तरित गर्न सक्नुहुन्छ । केटाकेटीले तपाईंको कक्षामा धेरै कुरा सिकिरहेका छन् र तिनको सक्रियता तथा आत्मविश्वास बढ्दै गएको छ भन्ने महसूस गर्न थालेपछि अभिभावकले पनि तपाईंलाई पूरापूर सहयोग गर्नेछन् । स्वयम् बच्चामा पनि ‘यो मेरो आफ्नै कक्षा हो’ भन्ने भावना पैदा हुनेछ । उनीहरू जिम्मेदार हुनेछन् र कक्षा–कोठालाई सफा र अनुशासित राख्नेछन् । उनीहरूको व्यक्तित्वको विकास त हुने नै छ !
(कक्षा–कोठा व्यवस्थापन र प्राथमिक कक्षामा पढाउने तरीकामा विशेषज्ञता हासिल गरेकी रूथ रस्तोगी भारतको ‘स्कूल ट्रान्सफर्मेशन कार्यक्रम’ सँग सम्बद्ध छिन् ।)
साभारः शैक्षणिक सन्दर्भ, मूल अंक–५८ मा प्रकाशित सामग्रीमा आधारित ।
शिक्षक मासिक, २०७६ मंसीर अंकमा प्रकाशित ।